Posted by: chhepyastra weekly | अगस्ट 27, 2011
कामचलाउ भएपछि काम गर्नु हुदैन भन्ने प्रथा बेठीक हो
लोकेन्द्र बिष्ट, मन्त्री- स्वास्थ्य मन्त्रालय
० तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री हुनु भएको यो छोटो अवधिमा के-के उल्लेखनीय कार्य गर्नुभयो ?
उल्लेखनीय कामहरू के-के भए भन्ने कुरा मिडियाबाट पनि आइरहेका छन् । खासगरी अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी ऐनलाई बढाइयो र निर्णय गरियो त्यसपछि सूर्तीजन्य पदार्थहरूको ऐनको कार्यान्वयन गरियो । कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधायक अहिले सदनमा छलफल भइरहेको छ, त्यसैगरी, अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालभित्र जुन अस्तव्यस्तता, देखिएको छ, त्यसलाई हटाउनका निम्ति केही स्थलगत अनुगमनहरू गरिएको छ । मन्त्रालयभित्रै स्टिम बसाल्नको लागि कार्य भइरहेको छ । मन्त्रालयभित्र नै सिस्टम छैन । अर्को कुरा बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा घााटीको थाइराइडको अपरेसन गर्नुपर्नेमा पाठेघर फालियो, त्यसमा दोषीहरू जो छन्, तिनीहरूलाई घटनाको छानबिन गरी कारवाही गर्न एउटा सात सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो, त्यसले प्रतिवेदन पेस गरेको छ, त्यसलाई २-३ दिनभित्र अध्ययन गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछु । त्यसैगरी, काम चलाउ हुादा धेरै मन्त्रालयमा र धेरै मन्त्रीहरू जागर लगाएर काम नगर्ने जुन प्रथा छ, त्यस प्रथालाई चिरौा कि भनेर म काम चलाउ भए पनि निरन्तर मन्त्रालय आइरहेको छु, काम गरिरहेको छु । कर्मचारी साथीहरूसाग मिलेर तपाईंहरू स्थायी सरकार हो, हामी अस्थायी सरकार हो तर अस्थायी भएपछि आˆनो कामकर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भनेर आˆनो काम जारी राखेको छ ।
० तपाईं अस्पताल छड्के गर्न जादा आफैाले बेइज्जति भोग्नुपर्यो भन्ने चर्चा प्रचारमा आइरहेको छ, वास्तविकता के हो ?
बेइज्जती भन्नु के भनौ मैले छड्के जाच गर्नुको पछाडि अस्पतालमा अहिले जुन अव्यवस्था छ, व्यवस्थापनको राम्रो पाटो छैन, सरसफाइ छैन, बिरामीप्रति सभ्य, व्यवहार छैन । त्यसपछि सिस्टम छैन, जिम्मेवारीबोध छैन, त्यहाा उपलब्ध जनशक्तिलाई उचित ढङ्गले विन्यास र परिचालन गर्न सकिएको छैन, त्यहाको साधन र स्रोत सबैलाई सदुपयोग गर्नुको अलावा दुरूपयोग गरिएको अवस्था छ । मुख्यगरी स्वास्थ्य क्षेत्र पहुाचवालाहरूको पकडमा छ र कमाउने थलो बनेको छ, यो हुनुहुन्न भन्नेलाई छ । छड्के जााचमा गएको बेला वीर अस्पतालमा विद्यार्थीहरू रहेछन्, मैले उनीहरूलाई सोधेा । जहाा म मन्त्री भए पनि साधारण भेषभुषामा सामान्य नागरिक जसरी गएको थिएा । त्यहा मैले एकजनालाई तपाईंको ड्युटी इन्चार्ज को हुनुहुन्छ भनेर सोधेा ती महिलाले सितिमिती वास्ता गरिनन्, त्यसपछि फेरि तपाईंले सुन्नु भएन, तपाईंको ड्युटी इन्चार्ज को हुनुहुन्छ भन्दा झर्केर बोलिन् र हेरिनन् पछि मैले म स्वास्थ्यमन्त्री आएको तपाईंले यसो गर्नु हुादैन नि तपाईंले राम्रोसाग बोल्नुपर्छ, अब हामीलाई त यस्तो गर्नुहुन्छ, अरु बिरामीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर म त्यहाबाट हिाडे । पढे-लेखेका मानिस त्यस्तो हुनुहुादैन । पढे-लेखेका मानिस विनम्र हुनुपर्छ । पढे-लेखेका मानिस रुखो र तीखो काडाजस्तो होइन, फलेर झुकेको नुहेको रुखजस्तो हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो डाक्टर, नर्सहरू जो छन्, उनीहरूले बिरामीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ । उहााहरूले मलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि बिरामीहरूलाई राम्रो व्यवहार गरिदिनुभयो भने म सबभन्दा खुसी हुन्छु । त्यो मन्त्री हो भन्ने थाहा पाएपछि अघिपछि लाग्ने, चापलुसी गर्ने, गुलामी गर्ने पुच्छर डोलाउादै अघिपछि गर्ने अनि बिरामीहरूलाई कुकुरलाई जस्तै छिःछिः, दुरदुर गर्नु सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा हो ।
० ठूला अस्पतालहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् भनेर बारम्बार प्रचारमा आइरहन्छन्, यसलाई सुधार्न कुनै ठोस योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
भ्रष्टाचारलाई रोक्न दुई-तीनवटा कुराहरू हुनुपर्छ । पहिलो कुरा अनुगमन समिति हुनुपर्यो, र त्यहाा हुने हरेक हिसाब-किताबहरू पारदर्शी हुनुपर्यो । दोस्रो कुरा अस्पताल विकास समिति जुन छन्, ती आफैामा जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्यो । तेस्रो कुरा, जनताहरू सचेत हुनुपर्यो र त्यहााभित्र हुने नाजायज कामहरूलाई खबरदारी गर्ने, निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने काम हुनुपर्यो । जहाा बद्मासी हुन्छ, जहाा भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी भइराखेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र निषेध गर्नुका निम्ति कमसेकम यी कामहरू हुनु जरुरी छ । यसको संयन्त्र बनाउन माथि
बाट नै सोच्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
० मुलुक कामचलाउ सरकारबाट चलिरहेको छ, कहिलेसम्ममा सरकार बन्ला ?
आज प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुादैछ । सहमतीय सरकार त बनेन बनेन बहुमतीयभित्र पनि सहमति हिसाबले जाने भन्ने छ । छिटोभन्दा छिटो निकास पाउनुपर्छ । निर्धारित मिति आज निर्वाचन भएर नयाा सरकार पाउनुपर्छ भन्ने हो ।
० के अब माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ त ?
सरकार, माओवादीकै नेतृत्वमा बन्छ । ’cause देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि माओवादी नै हो । यो देशमा सबैभन्दा आमूल परिवर्तन गर्ने मुद्दा उठाउने माओवादीलाई सबै क्षेत्रमा पछि पार्ने विडम्बनायुक्त कुरा भएको छ । त्यसकारणले पनि सदन, सडक र सरकारमा सबैतिर छाउने माओवादीलाई बाहिर राखेर अरुको सरकारमा जान्छ ? सरकारको नेतृत्व उसले गर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व र डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा बहुमतीय सरकार अर्थात् बहुमतीयभित्र सहमतीय ढङ्गले शान्ति र संविधानलाई यथासमयमा हल गर्ने गरी कार्यतालिकासहित अबको सरकार, संविधानसभा र व्यवस्थापिका अघि बढ्नुपर्छ ।
० भन्नाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, यसको विकल्प नै छैन । अब नेतृत्व माओवादीको हुनुपर्छ । अब स्थिर खालको सरकार बनाउनुपर्छ । बिहान सरकार बन्ने र साझ ढल्ने अस्थिर खालको, पिपलपाते खालको सरकार भएर भएन । संविधान बेलैमा बन्नुपर्यो, संविधान एक थान खोस्टो फालिदिने कुरा होइन, त्यो संविधानले गणतन्त्रको सम्बोधन गर्नुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ शासकीय स्वरूप नया हुनुपर्छ, निर्वाचन प्रणाली नया हुनुपर्छ, संघीयताको विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ र देशलाई समाजवाद उन्मुख र जनताको संघीय गणतन्त्रतिर अघि बढ्नुपर्छ ।
० अन्त्यमा केही भन्न चाहुनुहुन्छ ?
कामचलाउ सरकारको बेलामा देशमा ठूलाठूला नराम्रा दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यस्तो हुनुहुादैन र कामचलाउमा छौ भनेर मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लापरवाही गर्नु हुादैन । कामचलाउ भएपछि काम गर्नु हुादैन, सुतिराख्नुपर्छ भन्ने प्रथा बेठीक हो । जनता देशका लागि जतिखेर पनि काममा डटिरहने, खटिरहने मानसिकता, चिन्तन र प्रवृत्तिबाट अघि बढिनुपर्छ । यसले गर्दा भोलि आउने सरकारलाई र जनतालाई सेवा, सुविधा दिइराख्ने काम हुन्छ । शान्ति र संविधानको मुद्दालाई शीर्षबिन्दु र केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै अब बन्ने सरकारले कार्यतालिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यो लाजमर्दो तरिकाले पटक-पटक म्याद थप्ने काम नगर्ने, फेरि म्याद थप्ने काम गर्नु हुादैन । मुख्य कुरा सेना समायोजन राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा टुङ्गो नलगाई संविधान बन्दैन, वास्तविक यही हो । यी कुराहरू सबै तपाईंको क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक पत्रिकामार्फत् सबै हाम्रा आदरणीय जनसमुदाय र पाठकवृन्दकहा पुर्याउनुभयो भने क्षेप्यास्त्रको सार्थकता अरु बढ्नेछ ।